Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Tatitra momba ny valizy very: kitapo 853,000 nohafohezin'ny kaompaniam-pitanterana amerikana tamin'ny taona 2020
Tatitra momba ny valizy very: kitapo 853,000 nohafohezin'ny US Airlines tamin'ny taona 2020
Raha ampitahaina tamin'ny tamin'ny taon-dasa dia nihena be ny fifamoivoizana an'habakabaka ary hitantsika fa hita taratra amin'ny isa ambany kitapo nisy lesoka tamin'ny taona 2020 raha ampitahaina amin'ny 2019
Allegiant Air dia mikarakara tsara ny valizinao mandritra ny taona faharoa misesy
Ny American Airlines dia misongona ny Envoy Air ho mpikarakara valizy ratsy indrindra
Ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka amerikana miisa 3 amin'ny taona 2020 dia ny fikirakirana entana dia ny Allegiant, Southwest ary Hawaii
Isan-taona, manam-pahaizana momba ny dia no mamorona tatitra mampiseho ny valizy tsy mandeha amin'ny laoniny avy amin'ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka amerikanina, ary ny 2020, na eo aza ny toe-javatra COVID-19, dia tsy misy hafa amin'izany. Mazava ho azy, nisy dia kely kokoa ny dia tamin'ny taona 2020 noho ny taona 2019, ary hita izany amin'ny isa valizy very. Raha ampitahaina tamin'ny taona lasa dia nihena be ny fifamoivoizana an'habakabaka, ary hitantsika fa hita taratra amin'ny isa ambany kitapo nisy lesoka tamin'ny taona 2020 raha oharina tamin'ny 2019.
Tamin'ny taona 2019, kitapo 2.8 tapitrisa no tsy namboarin'ireo zotram-piaramanidina amerikana. Tamin'ny taona 2020, kitapo 853k ihany no tsy voadio, izay saika 2 tapitrisa latsaka noho ny tamin'ny taona lasa. Nanomboka tampoka ny fiovana, rehefa nisy vokany ny fepetra voan'ny areti-mifindra coronavirus. Raha ny tena manokana, efa ho 19 heny ny entana tsy voamarina tamin'ny volana aprily noho ny tamin'ny volana janoary, taratry ny fidinan'ny mpandeha be nandritra io vanim-potoana io.
Amin'ity fikarohana ity dia nanangona angon-drakitra avy amin'ny seranam-piaramanidina 16 amerikana izahay. Ny valiny dia nampiseho fa tamin'ny taona 2020, niditra an-tsokosoko maherin'ny 200 tapitrisa izy ireo ary nitantana kely kokoa noho ny 850,000, midika izany fa 2020% fotsiny ny vintana ho an'ny kitaponao.
Ho an'ny taona faharoa amin'ny andalana, Rivotra Allegiant mandray ny lohany ho toy ny kaompaniam-piaramanidina tsara indrindra ho an'ny fiarovana ny valizinao, miaraka amin'ny 0.15% amin'ireo harona enplaned ihany no diso. Allegiant Air dia arahin'ny Southwest Airlines ary Hawaii Airlines, mahatonga azy ireo ho zotram-piaramanidina telo voalohany amin'ny fikirakirana valizy azo antoka. Allegiant Air dia natsangana tamin'ny 1997 ho WestJet Express ary fananan'ny Allegiant Travel Company, orinasa iray ampaham-barotra ampahibemaso miaraka amina mpiasa 4,000.
Tamin'ny taona 2019, ny Envoy Air no naka ny toerana farany amin'ny fikirakirana valizy azo antoka. Saingy, tamin'ny taona 2020 dia nahatratra ny American Airlines ny mpamatsy kaompaniam-pitaterana an'habakabaka ary tonga amin'ny faharoa ratsy indrindra. Ny American Airlines sy ny Enjoy Air dia diso lalana, isaky ny 0.597% sy 0.587% ny entana notanan'izy ireo tamin'ny taona lasa. American Airlines, miaraka amin'ireo mpiara-miombon'antoka aminy, dia miasa tambajotram-pifandraisana iraisam-pirenena sy anatiny miaraka amin'ny sidina efa ho 6,800 isan'andro mankany amin'ny toeran-kaleha 350 any amin'ny firenena 50 mahery.
Ahoana ny fomba hialana amin'ny tsipika fahatongavana COVID-19 any Honolulu sy Maui